I-Raw Tianeptine powder (66981-73-5) Abakhiqizi - Phcoker Chemical
I-tianeptine powder iyinhlangano ye-nootropic futhi i-serotonin ekhetha ukuvuselela kabusha i-serotonin (SSRE). Ngokuvamile ......
I-Raw Tianeptine powder (66981-73-5) Imininingwane
I-Tianeptine powder iyimithi ekhethekile yokucindezeleka nokucindezeleka eyenza ukutholakala kwe-serotonin (i-5-hydroxytryptamine; i-5-HT), ne-5-hydroxyindoleacetic acid (i-5-HIAA) emathisini ebuchopho.
▪ I-Tianeptine ithuthukisa izimpawu zokucindezeleka okukhulu (MDD)
▪ Usizo lwe-Tianeptine olukhubaza isifo sofuba nesifo se-asthma
▪ I-Tianeptine ithuthukisa isimo sengqondo futhi ikhuthaza ukukhathazeka.
▪ I-Tianeptine yandisa ukuthi isifo se-serotonin sithatha kangakanani
▪ I-Tianeptine ithuthukisa ukugqugquzela, ukugxila nokuqonda, ukunqanda ukukhathazeka, ukuvuselelwa nokunciphisa ukukhathala okungqondweni.
I-tianeptine powder ngokuvamile ibhalwe ngomthamo we-12.5 mg futhi ithathwa kathathu ngosuku. Ngokungafani namanye ama-TCA kanye nama-serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) akhethiwe, ama-tianeptine amanani akudingeki akhuliswe kancane futhi i-taper uma imithi ishiyiwe ayidingekile.
Imiphumela emibi ye-tianeptine powder iyamangalisa kakhulu. Uma kuqhathaniswa namanye ama-TCA kanye nesigaba se-SSRI sama-anti-depressants, i-tianeptine powder cishe ayinakho imiphumela emibi. Naphezu kohlelo lwaso lomphumela ophansi, kubalulekile ukungalingani ne-tianeptine ne-monoamine oxidase inhibitors noma ezinye izidakamizwa zokucindezeleka njengoba inhlanganisela ingasongela ukuphila. I-tianeptine akufanele iphinde ixutshwe ne-anesthetics futhi ukusetshenziswa kwayo kufanele kuphele i-24-48 ngaphambi kokungenela okuhlinzekwa okudinga ukuhlinzeka ngezinzwa noma i-hypnotics. Nazi eminye imiphumela emibi ejwayelekile ehambisana ne-tianeptine.